ahoana no filokana namelatra ny asa
Raha atambatra, dia izao no nahazo ny $5.4 tapitrisa amin'ny velona ny fifaninanana lalao ahoana no filokana hanimba fiainana. Stammen nahita ny tenany tao amin'ny matchup manohitra ny maro poker ny henjana indrindra mpilalao ahoana no filokana namelatra ny asa. Crawford nitandrina ny hiady handeha eo dia hanaovana ilay fandidiana mba hanafoanana Hawkins eo amin'ny toerana fahefatra boutique sfr geant casino chenove.
Stammen efa nanana manan-danja maro mandresy amin'ny asany boutique sfr geant casino frejus. Ny 32 taona naka volamena fehin-tànana, ary marina ny $506,000 tamin'ny 2009 WSOP $2,500 NLHE fifaninanana, ary koa ny nahazo ny anaram-boninahitra handresy amin'ny 2014 WPT Fiadiana ny tompon-daka izay nanampy izy $1.35 tapitrisa ny banky.
Toy ny loha-maso ny asa, dia nanomboka nivelatra, Stammen naka bazana kabone oharina Crawford ny tampony roa mba hametraka ny mpifaninana aminy eo amin'ny tady. Ny fifaninanana ny tena zava-nitranga nisarika ny 604 ampy, izay niafara tamin'ny loka farihy $906,000 fa rava voalohany miantoka ny $750,000 boutique sfr geant casino hyeres. Izy no nahazo ny laharana fahatelo ao amin'ny Ohio ny Fotoana Rehetra Vola List, ary 99th eo amin'ny U. Rehetra-Fotoana Vola Lisitra.